'ह्याकरले चाहे जुनसुकै बेला पेमेन्ट सिस्टम आफ्नो हातमा लिन सक्छन्'
काठमाडौं- भुक्तानी प्रणालीको असुरक्षाको विषयले केहि दिनदेखि ग्राहकहरु त्रसित छन्। प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली साइवर अपराधकाे घटनामा मुछिएसँगै बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका विभ...
एकै पटक ३१ अर्बको ट्रेजरी बिल बोलकोबल गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. ३१ अर्ब २३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार बोलकबोलबाट उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । सोमबार २ बजे बोलकोबल भएर मंगल...
बैंकका कर्मचारीले आगामी वर्षले पाउने विदा सार्वजनिक
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षमा बैंकमा हुने बिदा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक बिदा हुने दिनका साथै कार्यालय खुल्ने समयको बारेमा पनि जानकारी गराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख १ गत...
लकडाउनमा खुल्दैछन् बैंक (भिडियो स्टोरी)
२३ चैत, काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएमा बैंकहरुको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न लकडाउनपूर्व नै उठेको थियो । राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले देशमा लकडाउन भए पनि बैंकल...
रौतहटमा १३ जना क्वारेनटाइनबाट घर फर्के , अझै २ सय २२ जना क्वारेन्टाइनमा
बालबिक्रम कार्की रौतहट, २३ चैत । रौतहट जिल्लामा हालसम्म क्वारेनटाइनमा बसेका मध्ये १३ जना आफ्नो घर फिर्ता भएका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेनटाइमा राखिएका उनीहरु नेपाल आएको १४ दिन पुग...
बैंकर्स संघका अध्यक्षको प्रश्न- तिर्न सक्नेलाई छुट दिनुपर्छ र ?
२३ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण रोकथामका लागि देश पूरै लकडाउन भए पनि बैंकहरुले दिने सुविधा यथावत छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा समस्या नपरोस् भनेर सहुलियत समेत घोषणा गरिसकेको...
कोरोनासँग जुझ्न युएई केन्द्रीय बैंकद्वारा ७० अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा
दुबई, २३ चैत । युनाइटेड अरब इमिरेट्सको केन्द्रीय बैंकले कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न ७० अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । तेलको धनी राष्ट्र युएईको केन्द्रीय...
चैत महिनामै ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै राष्ट्र बैंक
२३ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यतालिका बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यकातालिका बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वज...
क्षति अनुमान गरी थप राहत चाहिन्छ, सिसिडी रेसियो हटाउन आवश्यक, बासुदेव अधिकारीको लेख
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड संक्रमणको असरबाट नेपाली व्यवसाय, तिनले प्रदान गर्ने रोजगारी र वित्त प्रणालीलाई जोगाउने सम्बन्धमा चैत १६ गते १९ बुँदे परिपत्रमार्फत शीघ्रातिशीघ्र आफ्नो रेस्पोन्स सार्वजनिक...